Uranus Series Frequency Low Online UPS ukungasizeleki iteknoloji, idibanisa kunye eziphambili DSP yedijithali technology kolawulo hlabathi ngoku, yaye IGBT aqhelelkileyo Pulse Ububanzi kwezwi ubuchule (PWM) .Double-ukuguqulwa yoyilo yethopholoji online wenza amaza imveliso ye UPS, leyo esetyenziselwa umkhondo, kwisigaba-utshixo, Regulator ombane kwaye coca ulwelo ngaphandle ingxolo, zingaphazanyiswa evela ukuhla kwamandla udibaniso esulungekileyo sine unikezelo wave amandla, iyime UPS ezibanzi ngakumbi ngokugqibeleleyo ukhuseleko ukuze abasebenzisi. Emva Prostar R & D elaborative iziko eyenzelwe yeas ngaphezulu kwe-10, Prostar uyile imodyuli, umsebenzi wakhe jikelele intsebenzo izihlandlo ezi-5 inokuthenjwa kwaye bezinzile ngaphezu UPS rhoqo, MTBF uphezu iiyure 300,000.
Uranus Series Frequency Low Online UPS baxhotyiswa abaguquli bodwa standard eyakhelwe-output, switsha bypass eme ndawonye manual ukugcina utshintsho, ukwenza olu ngcelele UPS ngaba inobunzima eliphezulu kakhulu ukuzibandakanya ngamafutshane-wesiphaluka. Iza kusetyenziselwa okusingqongileyo okubi. Kwakhona iye function.Moreover ukukhusela egqibeleleyo, ukuba unalo igalelo AC, phezu-ombane, phantsi-ombane, imveliso phezu-ombane, elifutshane ukhuselo wesiphaluka, inverter, rectifier phezu-lobushushu ukhuseleko, ombane phantsi-ombane isilumkiso, ibhetri phezu ukhuseleko yokutshaja kunye nezinye ukhuselo nye, ukuze kuqinisekiswe ukusebenza kwenkqubo stably kwaye ngokuthembekileyo.
Uranus Series Frequency Low Online UPS iquka nabazala phase-3 kunye outs phase-3 ukusuka HT6K-HT400K, anokuba ngaxeshanye kunye neeyunithi 8 UPS ngqo, kokuphazamiseka ukuzila. technology bhetyebhetye parallel linokusetyenziswa imithwalo ezahlukeneyo kunye systems.According iimfuno zabathengi 'zenza, oko kwenza N + 1 okanye N + X yokwakha, kodwa ngokweemfuno ezahlukeneyo lwabathengi kunye nezakhono ezahlukeneyo, oko kungaba acha- neeyunithi 8 random UPS, nabo bonke umthwalo zizakulayishwa ngabo bonke 8 iiyunithi UPS averagely kwenkqubo UPS ezingasafunekiyo ngaxeshanye. Naziphi uhlolwe kwenkqubo parallel ezingasafunekiyo iye yasilela, i-UPS uya kwabelana komthwalo walo ngoko nangoko, ukuqinisekisa ukuba inkqubo esebenzayo ngokuqhelekileyo. Ngexesha lenkqubo UPS parallel, ayithethi ukubeka umkhosi kunye yokulinda omnye, kodwa kukhethwa ngabathengi eguquguqukayo. Esokuqala kuvuliwe UPS ngokuzenzekelayo umkhosi, xa inkqubo host ayiphumelelanga, umkhosi yesazisi nangoko watshintshelwa kwesinye UPS, ngokwenjenjalo kuqinisekiswe ubonelelo lombane abaxhasi ngexesha ngokusebenzisa inkqubo, ukuze abe oyinyaniso uninterruptible ugesi.
1) DSP wedijithali technology ulawulo
inkqubo Core isebenzisa zonke-digital technology yehlabathi kakhulu oluphambili ulawulo DSP, leyo ngempumelelo ukuqinisekisa oluchanekileyo nkqubo ongundoqo UPS, kunye nokubaleka ukuzila.
Ludityanisiwe IGBT inverter technology ophezulu ethembekileyo eliphezulu-kakuhle abanama-frequency Pulse Ububanzi kwezwi technology (PWM).
Isenokuba zokunciphisa ingxolo kunye nelahleko amandla, ukuqinisekisa abasebenzisi Usenokufaka ezahlukeneyo neemeko zokusebenza afumane imveliso ombane ophezulu ezikumgangatho eliphezulu-impumelelo iindleko, kodwa benza igalelo ukusebenza ngaphezulu kwe-95%.
3) Pure-online technology ukuguqulwa kabini
enokuthenjwa kwaye uzinzile, emva lihluzwe kwaye kulawulwa, imveliso lokutshangatshangisa sine ukusuka kabini technology ukuguqulwa ecocekileyo-intanethi, hayi kuphela uwabonisa ukuphazamiseka ingcinezelo filter, kodwa kunye abaguquli standard imveliso bodwa, esa emile, isondlo bypass, ukwenza le mveliso kunye namandla ngaphezulu ukuzibandakanya ngamafutshane yangoku wesiphaluka. Kwaye linokusetyenziswa kwindawo yokusebenza embi.
4) ukhuseleko Ogqibeleleyo
imisebenzi yokhuseleko inkqubo ngokugqibeleleyo: Kuye AC phezu-ombane, phantsi-ombane, imveliso phezu-ombane, phantsi-ombane, imveliso omninzi, elifutshane ukhuselo wesiphaluka, inverter, rectifier phezu-lobushushu ukhuseleko, isilumkiso ombane phantsi-ombane, ibhetri phezu zibiza ukhuselo kunye nezinye ukhuselo kwenye ukuqinisekisa inkqubo ukuze isebenze stably kwaye ngokuthembekileyo.
5) Linamandla Parallel Udibaniso Function ezingasebenziyo
Ehlala noluthembekileyo nokuyilwa kwimizi-uhlobo imodyuli, kudityaniswe inkqubo epheleleyo digital yolawulo DSP engundoqo iteknoloji, ukwenza le mveliso hayi zingasetyenziswa kuphela N +1 / N + X komsebenzi kwaye isakhono Yenze banzi amandla, kodwa ndivumele amandla ezahlukeneyo ngamaxesha ahlukeneyo UPS kungaba ngaxeshanye. Kwanciphisa kakhulu iindleko lomsebenzisi pre-nasemva-zokuthenga, kunye neendleko yokukhula, kodwa sandisa izithuba aphezulu ukwandisa umthamo.
6) Inkqubo Onamandla yonxibelelwano
Umgangatho zixhotyiswe RS232 interface, wenze ukuba baphinde zoqhagamshelwano, isixhobo ziguquka likaxakeka EPO igalelo interface.
7) ukusasaza elisezantsi amandla-kodwa high-kakuhle
Ukufezekisa ngaphezulu kwe 98% ngempumelelo ultra-high phantsi kuqoqosho lokusiNgqongileyo, leyo ngempumelelo ukuzisa phantsi umbane, nangempumelelo ngokungqinelana neemfuno ekujoliswe ezonga umbane le lizwe.
8) Inkqubo Ipredikshini isilumkiso
umsebenzi panel LCD Ubhaqo oluzenzekelayo kunye isilumkiso ngexesha kwangaphambili, kunye umsebenzi yokuqalelisa self-kokuxilongwa. Kungenzeka ukunqanda ingozi efihlakeleyo ngexesha ngenxa ukusilela UPS ', nto leyo ibangele imingcipheko. Kwakhona kungenzeka ngokuzenzekelayo alarm ngokumisela obhobhozayo ibhetri eceleni ixesha ngaphantsi kwe ixabiso iseti.
9) Isigqeba Humanized umboniso
Humanized Useto panel, abasebenzisi ungacwangcisa parameters indlela, umhla, imveliso ombane, amandla ibhetri, umsebenzi alamu, cima ikhompyutha ukukhanya-umthwalo, ixesha inkqubo qalisa, izicwangciso Modem, ezifana nemiyalelo, naye kunokuba ukuya ku 120 ulwazi ukungaphumeleli engaqhelekanga ukuba abasebenzisi ukuze ubuze.
10) Super-strong bume bhetyebhetye
Le mveliso iye ukuziqhelanisa ophezulu zokusingqongileyo, ebanzi AC igalelo uluhlu, kakhulu kunciphisa nezihlandlo ibhetri usebenzisa, nangempumelelo usinika ubomi bebhetri.
11) Linamandla Lokukhweliswa Amandla
Usebenzisa kabini technology ukuguqulwa ecocekileyo-intanethi, kunye output abaguquli bodwa, esa emile, kunye esa yesondlo.
Inverter kokukhweliswa Amandla zafikelela 110% / 125% / 150% ixesha ukulayisha ingahlala 300min / 10min / 1min.
Dlula kokukhweliswa Amandla zafikelela 150% / 170% / 250% sithwalisa ixesha ingahlala 60min / 10min / 1min.
HT6K-HT30K (in-ezintathu kunye outs ezintathu)
48 ~ 54dB (Distance 1m)
53 ~ 60dB (Distance 1m)
HT40K-HT80K (in-ezintathu kunye outs ezintathu)
53 ~ 62dB (Distance 1m)
3 izigaba 4 macingo emhlabeni, 380V ± 25%
izigaba 3 iingcingo-4, 380V ± 1%
50Hz / 60Hz ± 0.05% (By Ibhetri)
umthwalo Balance =-1%, umthwalo ukungalingani = 3%
Phase angela shif
umthwalo Ibhalansi = 1 °, umthwalo ukungalingani = 2 °
Imveliso kwi-0 ~ 50% ~ 100% ≤5%, 10ms impendulo ≤
ixesha Ukutshaja (Standard)
Igalelo phezu-ombane, ngaphantsi-ombane; imveliso omninzi, shortcircuit; Inverter phezu-ubushushu; Battery ngaphantsi ombane, phezu-ombane
Running lobushushu & Ukufuma
Celsius 0 ℃ -40 ℃ isidanga, Ngaphantsi kwe-95% (ngaphandle nokucutheka)
<1000m (kunye nokwanda 100m, kuya kunciphisa imveliso we-1%) max 4000m
contact Dry (eliphantsi ibhetri, ibhetri nokudubula, bapass / isiphoso), EPO
EPO and ukudlula
IP20 (wavula umnyango wangaphambili)
N + 1, N + X, kuba ngaxeshanye kunye umthamo ngamandla differenct
Ngelo phakathi lokungaphumeleli
Zingabi nalo & dampproof, Ukuzahlula inverter sombane, umbane kwesidingo edalwayo, itshintshela emile, manual maintainence ushintshele
Industrial Ke perry irhafu yoRhwebo
Internet ezinkulu Computer Room
Previous: 100-400KVA uhlolwe Ubuninzi Phantsi (3: 3) Okulandelayo:90KVA EZIIMODYULI UPS (30U)
100-400KVA uhlolwe Ubuninzi Phantsi (3: 3)